Maxaa la sameeyaa haddii heerkulbeegga meerkurigu jabo: waa sun? | Cusbooneysiinta Cagaaran
Maxaa la sameeyaa haddii heerkulbeegga meerkurigu jabo: waa sun?
Dhamaanteen waxaan u isticmaalnay heerkulbeegga meerkuriga waqti ka mid ah nolosheena si aan u cabirno heerkulka jidhka. Waa aalad si ballaaran loogu adeegsaday waxyaabo badan marka laga reebo in loo isticmaalay in lagu qaado heer kulka jirka. Sababta oo ah heerkulbeegga noocan ah wuxuu kiciyaa khataro qaarkood inta la isticmaalayo, waxaa la go'aansaday in lagu beddelo heerkulbeegyo cusub oo dijitaal ah. Heerkulbeegga meerkurigu wuxuu noqon karaa mid khatar ah haddii uu jabo. Sidaa darteed, waxaan dooneynaa inaan sharaxno waxa la sameeyo haddii heerkulbeegga meerkurigu jabo. Ma sun baa?
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa dhammaan astaamaha, isticmaalkiisa iyo waxa la sameeyo haddii heerkulbeegga meerkurigu jabo.
1 Heerkulbeegga meerkuriga
2 Adeegsiga heerkulbeegga meerkuriga
3 Maxaa la sameeyaa haddii heerkulbeegga meerkurigu jabo
4 Heerkulbeegyada ka sunta yar meerkurida
Heerkulbeegayaashani wax kale ma aha waa aalad uu dhisay nin reer Poland ah oo cilmiga fiisigiska ah iyo injineer lagu magacaabo Daniel Gabriel Fahrenheit. Waa guluub ku fidsan tuubo galaas khafiif ah oo dhexdeeda ah taas oo ah birta meerkurida. Maskaxda ku hay taas mugga ay birtu ku dhex jirto tuubada dhexdeeda ayaa ka yar mugga guud ee tuubbada. Si loo ogaado waxa qiimayaasha heer kulku yihiin, waxaa jira lambarro tilmaamaya kala duwanaanta heerkulka. Markii la weydiiyay sababta meerkuriga loogu isticmaalay heerkulbeegga noocan ah, in kastoo ay khatar tahay, jawaabtu waa inay aad u fududahay in la beddelo muggiisa iyadoo ku xiran heerkulka.
Taasi waa, heerkulka sare ama ka hooseeya ee jira, wuu sii ballaadhi doonaa wax badan ama ka yar. Hawlgalkan awgeed waxay suurtagal u ahayd in lagu calaamadiyo hor iyo kadib dhammaan sayniska dhammaantiis. Horumarinta heerkulbeegga meerkurigu wuxuu fududeyn karaa horumarka sayniska ee arrintan la xiriira. Sidaa darteed, waa nooc ka mid ah aaladda taas oo loo tixgeliyo ilaa maantadan tahay mid ka mid ah hal-abuurka ugu wanaagsan.
Si kastaba ha noqotee, inkasta oo ay noqotay mid ka mid ah ikhtiraacyada ugu fiican, looma isticmaalo maanta. In kasta oo xaddiga heerkulka ay dabooli karto uu aad u ballaadhan yahay, haddana waa la sii dheereyn karaa xitaa haddii la soo saaro nitrogen ama gaas kale oo aan firfircooneyn. Waana in heer-kul-kulmeeyayaashu ay leeyihiin khatar guud oo loogu talagalay adeegsigooda kala duwan.
Adeegsiga heerkulbeegga meerkuriga
ka heerkulbeegyada meerkuriga waxaa loo adeegsaday dhowr meelood oo aan ka aheyn heerkulka jirka. Weli waxaa jira guryo lagu arko heerkulbeegyadan albaabka hore si loo cabbiro heerkulka deegaanka. Waxaa sidoo kale loo adeegsaday isbitaalada si loo cabiro heerkulka bukaanada. Meelaha kale ee lagu isticmaalay heerkulbeegga meerkuriga waxay ahaayeen bangiyada dhiigga, kululeeyaha, tijaabooyinka kiimikada, foornooyinka, iwm Wershaddu waxay ahayd qayb sidoo kale u isticmaashay heerkulbeegga meerkuriga dhirta korantada, si loo ogaado xaaladda iyo heerkulka dhuumaha, qaboojiyaha iyo qalabka kululaynta, daryeelka cuntada, maraakiibta, rootiyada, bakhaarada, iwm. Waxaa xusid mudan in wax kasta oo la xiriira jikada ay sidoo kale isticmaaleen heerkulbeegyadan.
Ogow qiimaha heerkulka waxay ahayd lagama maarmaan in la soo saaro alaab ama la xaqiijiyo qaababka qaarkood. Waxaan ognahay in meerkurigu yahay cunsur dabiici ah oo lambarkiisa atomku yahay 80. Waxay si isdaba joog ah u dooneysay sanado aduunka saadaasha hawada tan iyo markii ay ka mid ahaayeen aaladaha saadaasha hawada sida barometerka, manometerka iyo aalado kale. Daraasadaha qaar ayaa sheeganaya isticmaalka birahaani ma ahan mid amaan u ah dadka, sidaa darteed si tartiib tartiib ah ayaa looga saaray suuqa.
Maxaa la sameeyaa haddii heerkulbeegga meerkurigu jabo
Shuruucda ayaa faraysa in aan wax qalab ah oo ka kooban meerkuri laga ganacsan karin. Waana in meerkuri la muujiyey inay qatar sare u leedahay caafimaadka iyo deegaanka. Cawaaqib xumadeeda waxaa ka mid ah wasakhaynta biyaha, carrada iyo xayawaanka.
Khatarta meerkurigu waxay ku jirtaa uumigeeda. Haddii heerkulbeegga meerkurigu uu jabo, wuxuu soo saari doonaa uumiga sunta ah ee la neefsan karo. Marka meerkuridu daato, waa in isla markaaba la ururiyaa ka hor intaanay cawaaqib xumo kale la helin. Badanaa, dadku ma yaqaanaan waxa la sameeyo haddii heerkulbeegga meerkurigu jabo. Noocyada noocaan ah, xaalad kastoo jirta maahan in nadiifiye faakiyuum ama xaaqin loo isticmaalo in lagu nadiifiyo. Sidoo kale laguguma talin karo inaad gacmahaaga ku soo qaadatid haraadiga meerkuriga ama ku daadi dareeraha hoosta musqusha ama saxanka.
Sidii aan horay u soo sheegnay, meerkurigu wuxuu awood u leeyahay inuu sumeeyo kumanaan litir oo biyo ah. Haddii aan ku shubno haraaga meerkuriga saxanka saxanka, waxaan wasakheyn doonaa kumanaan litir oo aan loo baahnayn. Ahaanshaha cunsur aad u wasakh badan, waxay awood u leedahay inay waxyeello culus u geyso qaddar yar. Marka la eego joogtaynta cunsurkan, markay dhulka ku dhacdo, waxay u kala baxdaa dhibco yar yar waxayna ku sii fidaysaa dhinac kasta. Isla marka heerkulbeegga la daadiyo oo dareeraha la sii daayo, waxaa fiican in carruurta iyo xayawaanka guriga laga soo saaro aagga oo la furo daaqadaha ama albaabbada si ay hawo u gasho.
Mid ka mid ah talooyinka ugu fiican ayaa ah isticmaal maro, galoofisyo iyo waji-gashi si aad u nadiifiso. Sidan oo kale, waa nalaga ilaalin doonaa suurtagal kasta oo lagu neefsado uumiga sunta ah. Haddii heerkulbeeggu ku dhaco dhul fidsan, way ka fududdahay in la nadiifiyo marka loo eego haddii sagxaddu leedahay dildilaacyo yar yar oo birta ka mid ah lagu tuuri karo. Waa lagama maarmaan in la hubiyo inaad leedahay dib-u-eegis wanaagsan oo aad u fiirsato dhammaan dhibcaha meerkurida ee ku jira ciidda, maadaama ay faddarayn karto oo ay sababi karto dhibaatooyin daran. Haddii aan ilowno inaan soo qaadno qaar ka mid ah dhibcaha oo qof ama xayawaan kasta oo taabto ama neefsado gaaska sunta ah, waxay u horseedi kartaa sumow, waxyeelo maskaxda ah, dhibaatooyinka dheef-shiidka iyo kelyaha.
Heerkulbeegyada ka sunta yar meerkurida
Marka la fiiriyo halista heer-kul-kulmeedyadan, waxaa fiican in a Tilmaamaha iibsashada heerkulbeegga in la doorto kuwa beddeli kara si badbaado leh oo wax ku ool ah. Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo heerkul-beegyada aan khatar ahayn oo leh waxqabad aad u sarreeya.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto waxa la sameeyo haddii heerkulbeegga meerkurigu jabo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Maxaa la sameeyaa haddii heerkulbeegga meerkurigu jabo: waa sun?
Dhul dhif ah